Air Canada iyo Transat waxay joojinayaan heshiiska wax soo iibsiga ee la soo jeediyey
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Canada iyo Transat waxay joojinayaan heshiiska wax soo iibsiga ee la soo jeediyey
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Investments • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air Canada iyo Transat waxay joojinayaan heshiis dhan $ 190 milyan
La joojinayay soo iibinta Transat ee Air Canada ayaa la joojiyay
Air Canada iyo Transat waxay markii hore ku heshiiyeen Juun 2019 iibka
Shuruudaha ayaa wax laga beddelay 2019 waxaana dib loo eegay 2020 sababo la xiriira saameyn dhaqaale oo aad u daran ee cudurka faafa ee COVID-19
Air Canada iyo Transat AT Inc. ayaa maanta ku dhawaaqay inay si wada jir ah isugu raaceen in la joojiyo Heshiiska Qabanqaabada ee ku saabsan soo jeedinta helitaanka Transat ee shirkadda Air Canada.
Air Canada iyo Gudbinta Markii hore waxay ku heshiiyeen bishii Juun 2019 iibsiga, shuruudahaas oo markii dambe wax laga beddelay bishii Ogosto 2019 ka dibna dib loo eegay Oktoobar 2020 taasoo ka dhalatay saameynta dhaqaale ee daran ee COVID-19 faafa.
Sidii hore loo shaaciyey, helitaanku wuxuu shuruud ku ahaa ansixinta mas'uuliyiinta sharciyeynta ee kala duwan, oo ay ku jiraan Guddiga Yurub ("EC"). Si loo buuxiyo xaaladaas muhiimka ah, Air Canada waxay bixisay oo ay wanaajisay xirmo muhiim ah oo daaweyn ah, taas oo ka baxsan dadaalka ganacsi ee macquul ah ee looga baahan yahay Air Canada ee Heshiiska Qabanqaabada iyo wixii dhaqan ahaan ay aqbaleen EC kiisaska midowga hore ee shirkadaha. Ka dib wadahadaladii ugu dambeeyay ee lala yeeshay EC, waxaa cadaatay, si kastaba ha noqotee, in EC aysan aqbali doonin la wareegida iyadoo lagu saleynayo xirmada daaweynta ee hadda la bixiyo.
Ka dib markii si taxaddar leh loo tixgeliyey, Air Canada waxay soo gabagabeysay bixinta bixinta daaweyn dheeraad ah, oo dhib badan, oo aan wali sugi karin ogolaanshaha EC, waxay si weyn u waxyeeleyneysaa awooda Air Canada ee tartamada caalamiga, si xun u saameynaysa macaamiisha, daneeyayaasha kale iyo rajooyinka mustaqbalka sida ay uga soo kabaneyso ugana saameynta cudurka faafa ee COVID-19. Gaar ahaan jawigan adag, waxaa lagama maarmaan ah in Air Canada ay diirada saarto abuurista xaaladaha ugufiican ee soo kabsashadeeda buuxda iyadoo la ilaalinayo lagana faa'iideysanayo dhamaan xooggeeda iyo hantideeda muhiimka ah oo ay kujirto dhaqankeeda shaqaale ee xoogan.
Air Canada iyo Transat labaduba waxay ku heshiiyeen in la joojiyo Heshiiska Diyaarinta iyadoo Air Canada ay bixinayso Transat khidmadda joojinta oo ah $ 12.5 milyan, iyadoo Transat aysan ku sii jirin wax waajib ah oo ah inay bixiso Air Canada wax lacag ah haddii ay Transat ku lug yeelato soo iibsasho kale ama macaamil la mid ah mustaqbalka.